Pr Zafy Albert : Tsiaro ny fahaefa-taonan’ny nahafatesan’ny Rain’ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena
mercredi, 13 octobre 2021 19:38
Efa-taona androany 13 oktobra 2021 no nahafatesan’ny filoha teo aloha Pr Zafy Albert. Nomarihana tamin’ny fametrahana fehezam-bonikazo tetsy amin’ny tsangambato an’ny Filoha Zafy Albert Ambohijatovo izany.
Tonga nanatrika ny lanonam-pahatsiarovana sy nametraka ny vonikazo teny an-toerana ramatoa Thérèse Zafy, vady navelany sy ny fianakaviany, notronon’ny Ben’ny tanàna an’Antananarivo Naina Andriantsitohaina mivady, ny filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana, sy ny solontenan’ny Loholona, ny Filohan’ny HCDDED ( Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit) , ireo mpiara-dia aminy.
Fahatsirovana ny olomanga ny androany, ary ny tantara tsy fanadino ho tsaroana hatrany ny fanekena sy ny fanetretena ary ny fijoron’ny filoha Zafy Albert, izay Rain’ny demokrasia sy ny fampihavanam-pirenena.
Nambaran’ny Ben’ny tanàna an’Antananarivo Renivohitra, Naina Andriantsitohaina, fa matoa nanaiky ny nijoron’izao tsangambato izao ny filoham-pirenena sy ny mpanolontsainan’ny tanàna dia noho ny fahatsapana fa misy ohatra velona amin’ny tantara tsy azo vonoina ho an’ny taranaka mifadimby.